Raiisul Wasaaraha oo ka hadlay go'aankii Puntland - BBC Somali
Raiisul Wasaaraha oo ka hadlay go'aankii Puntland
Image caption Raiisul Wasaare, Maxamed Cabdullaahi Maxamed
Raiisul Wasaaraha dowladda KMG ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Maxamed ayaa sheegay in Puntland go'aanka ay qaadatay uu yahay mid u furaya waji cusub oo adduunku uga quusto Soomaaliya.
Hadalka Raiisul wasaaraha ayaa ka danbeeyay, kadib markii toddobaadkan uu maamul goboleedka Puntland sheegay inuu go'aansaday in taageeradii iyo wadashaqeyntii ay kala noqdeen dowladda federalka ah, oo ay ku eedeeyeen in deeqihii caalamka ay isku koobtay.
Raiisul wasaaruhu waxa uu sheegay inuu uga digayo maamulka Puntland inay u dhaqmaan si masuuliyad ay ku jirto, haddii kale uga fiirsadaan arrintaasi.
Maxamed Cabdullaahi Maxamed, waxa uu sheegay in ay dowladdiisu haysato dhibaatooyin xagga ammaanka ah, taasi oo sheegay inay ka filayeen maamulka Puntland inay u gartaan dhibaatada ay ku jirto dowladda KMG ah, laakiin aanay al-Shabaab siinin taageero maskaxeed.
Raiisul Wasaaruhu waxa kale oo uu ka hadlay ujeedada safarkiisa, oo uu ku tilmaamay inay ahayd sidii ay Qaramada Midoobay uga warami lahaayeen wixii u qabsoomay xukuumaddiisa intii ay jirtay.
Maxamed Cabdullaahi Maxamed, ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dadaalka dowladdiisu ay ugu jirto sidii ay uga hortagi lahayd kooxaha Islaamiyiinta ee mucaaradka ku ah.